Iyabala kuba abaqondisi-mthetho: izibophelelo kwaye ethile iyabala iimpawu - Abaqondisi-mthetho ka-Us-intanethi!
Iyabala kuba abaqondisi-mthetho: izibophelelo kwaye ethile iyabala iimpawu
A lawyer, njengaye nawuphi na elinolwazi, liberal wekhredithi kuba iinkonzo, gcina ii-akhawuntiUkuba ke wathi, ukubaluleka le iyabala izibophelelo ukuba usekelwe ngokulawulwa iza kuxhomekeka ubume ukuze ube sele wanyulelwa ukuba basebenzise yakhe khondo lobungcali-mfundo lilonke (lawyer liberal kobakhe igama okanye zokusebenza company) ngokunjalo ukuhlawula irhafu indlela ukuze abe sele withheld (income tax okanye irhafu kwi company). Xa-a lawyer exercises yakhe umsebenzi kobakhe igama, abe kuwa phantsi elinye ezimbini izicwangciso: isicwangciso somgaqo-oomatshini-BNC okanye regime ingxelo controlled. I-simplifications kwi-iyabala ingaba ibaluleke kakhulu kwi-yezosondlo ye-oomatshini kodwa ke isebenza kuphela kwi-umda eliphantsi turnover. Isicwangciso somgaqo-oomatshini-BNC ngu-ukuvula abaqondisi-mthetho abo bathabatha ngaphantsi asixhenxe, euros imirhumo ngonyaka (lo umda kufuneka qho pro rata qho kwimeko a inxalenye ngonyaka). Xa lo mqathango yanelisekile kwinto yokuba, iyabala iimbali ye-lawyer yi-ultra-esenziwe lula (kubalulekile kwaphantse non-existent): Lo scheme ngu nabafana njengoko kangangoko ka-izibophelelo kodwa, enyanisweni, ingeniso cap (low ngokwaneleyo) meyi ecaleni abanye abaxhamli. Kuba irhafu ngeenjongo, kanjalo zinokuba efanelekileyo ku-opt ngenxa yokuba irhafu nolawulo olululo, i-imali evunyelweyo amathathu-ezine phambi kokufaka i-receipts ukuba progressive umlinganiselo ka-income tax. Ukuba a lawyer ifuna (okanye ukuba yawa phakathi regime ka-oomatshini-BNC nokokuba ube sele crossed i umda ukuba kuxhamla it), ziphantsi phantsi regime ingxelo controlled. Kwi-yokugqibela, iyabala izibophelelo ingaba ngakumbi substantial, kodwa baye bahlala? ngaphantsi ebalulekileyo kunokuba kwimeko ukusebenzisa corporation: A lawyer bakhetha ukusebenzisa yayo umsebenzi kwi-base. Kule meko, akayi kuba nako opt kuba abarhwebayo zesixeko"classics"(ezifana EURL, SARL, SASU, okanye SAS umzekelo), kuya, ukusebenza, yenza inkampani i'exercice libéral (SEL). Olu hlobo ubume ingaba particularity ukukhuphela iimpawu abarhwebayo iinkampani kwaye partnerships kwaye zisebenza ngayo ukuba imibutho yoluntu: iyabala izibophelelo ka-SEL ingaba phantse efanayo njengoko abo imposed kwi abarhwebayo iinkampani: kubalulekile ukuqaphela ukuba Umthetho akusebenzi kufuna recourse ukuba i-accountant. Kubalulekile iselwa conceivable kuba a lawyer ukugcina kuye-nkqu yakhe iyabala. Kuya ke kuba zilandelayo kwimisebenzi: ungeniso ka-iyabala eyenziweyo, yokulungiselela ka-VAT ubuyisela kwaye isibhengezo ka-iziphumo, yokulungiselela yonyaka-akhawunti, njalo-njalo. Lowo kufuneka, kuloo meko, fumana i-iyabala lwenkqubo oko kukuthi tailored yakhe imeko kwaye ukuba meets iimfuno zabo. A lawyer unako kanjalo sebenza accountant kwaye entrust ukuba kuye umsebenzi lowo ufuna: a umsebenzi womsindisi ukugcina ngenkxaso iyabala, i.e. a umsebenzi uhlolo kwaye komhlaba we-yonyaka-akhawunti (kwaye bundle ye rhafu). Ngaphezu koko, elinolwazi iintengiso uza kanjalo zikhathalele icala missions ezifana drafting yengqesho izivumelwano okanye ukusekwa ahlawule slips labasebenzi, ukuba ikhona, lawyer. Abaqondisi-mthetho abakhoyo ngokulawulwa irhafu kwi-mvuzo kuba inzala ukungena i-association ulawulo eziqinisekisiweyo (ezifana, umzekelo, ANAAFA - National Association of Administrative Uncedo kwaye Irhafu abaqondisi-mthetho). Oku ubulungu kuya kuvumela kubo hayi khangela zabo ingeniso ukwanda nge-amashumi amabini anesihlanu.
Elokugqibela: iyabala izibophelelo a lawyer vary ngokunxulumene isemthethweni isimo kuba oko kuya opts njengokuba umsebenzi wayo regime kuba taxation ka-profits. Nangona kunjalo, babo ekhaya kubaluleke ngakumbi kubalulekile kuba iinkampani Iyabala-Lula uya kufumanisa nabo bonke subjects enxulumene kufutshane okanye ukuza kuthi ga ngoku, ukuba iyabala kwicandelo.
Kule ndawo isicwangciso ingaba umbutho jikelele isibhozo imixholo kwi-ezisisiseko iyabala: - ezisisiseko concepts ka-iyabala, - iyabala iimfuno, enkulu iyabala, i-software, iyabala, - accountant, - seshishini uphuhliso, - mali uhlalutyo, - learning ka-iyabala. Umgaqo-nkqubo wabucala ka-Iyabala-Kulula.
Uvimba weefayili ka-attorneys kwi-Us - Conseil wesizwe des barreaux
البيان في خط (غير عاجلة) - على شبكة الإنترنت منصة الخط